Shiinaha 2019 Qaab Cusub Shiinaha Gudiga Goynta Bamboo Baqashada Baasaboorka leh 4 PCS soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Xingbei
Waxaan had iyo jeer si joogto ah kuu siineynaa adeegga macaamiisha ee ugu miyir-qabka badan, iyo noocyada ugu ballaadhan ee naqshadaha iyo qaababka leh qalabka ugu fiican. Dadaalladan waxaa ka mid ah helitaanka nashqado qaabeysan oo xawaare iyo diris ah 2019 New Style China FDA Bamboo Going Board Bamboo Chopping Board oo leh 4 PCS, U hoggaansanaanta falsafadda ganacsiga yar yar ee 'macaamiisha 1aad, horay u sii wad', waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa macaamiisha ka socota guriga iyo dibaddaba si ay noola shaqeeyaan.
2019 New Style China Serving Tray iyo Qiimaha Cuntada Jikada, Waxaan tan ku guuleysaneynaa iyada oo si toos ah uga dhoofineyno wigskeena warshadeena adiga. Hadafka shirkadeenu waa in la helo macaamiisha ku raaxeysanaya inay ku soo laabtaan ganacsigooda. Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa inaan kula shaqeyn doono mustaqbalka dhow. Haddii ay jirto wax fursad ah, ku soo dhawow inaad soo booqato warshaddeenna !!!
"Ku xakamee istaandarka faahfaahinta, ku muuji awoodda tayada". Shirkaddeenu waxay ku dadaashay inay abuurto shaqaale aad u hufan oo xasilloon oo shaqaale ah waxayna sahmisay habka ugu fiican ee amarka ah ee loogu talagalay Qiimaha Warshadda Shiinaha Dhammaan hal Kombuyuutar Macaamiil Macaamiil Macaamiil oo Macaamiil ah oo PC ah, Ku soo dhawow mid ka mid ah weydiimaha iyo welwelka waxyaabahayaga, waxaan horay u eegaynaa in la abuuro guur shirkad ganacsi oo muddo-dheer ah adiga iyo adiga muddada fog. maanta na soo wac.
Warshadda Qiimaha Shiinaha Taabashada 75 PC, Guddiga Isdhexgalka Smart Touch, Si aad uga faa'iideysan karto ilaha macluumaadka faafa ee ganacsiga caalamiga ah, waxaan ku soo dhaweyneynaa dadka wax ka iibsanaya meel kasta oo khadka iyo qadka ah. In kasta oo ay jiraan xalal tayo wanaagsan leh oo aan bixinno, adeegga wadatashiga wax ku oolka ah oo qanciya waxaa bixiya kooxdayada adeegga xirfadleyda iibka kadib. Liisaska alaabada iyo xuduudaha faahfaahsan iyo wixii macluumaad kale ah ee weil ayaa laguugu soo diri doonaa adiga waqtiga ku habboon su'aalahaaga. Marka waa inaad nala soo xiriirtaa adigoo noo soo diraya emayl ama na soo wac haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid shirkadeena. ou sidoo kale waxaad ka heli kartaa macluumaadka cinwaankeena boggayaga oo aan u nimid shirkadeena si aan u helno sahaminta duurka ee badeecadeenna. Waxaan kalsooni ku qabnay in aan wadaagi doonno wax wada qabsi iyo abuurista xiriir iskaashi oo xoog leh saaxiibbadeenna ku dhex jira suuqan. Waxaan raadineynaa weydiimahaaga.
Hordhaca ShirkaddaHebei Xingbei waxyaabaha birta mesh siligga co., Ltd. waa xirfadle soo saaridda noocyo kala duwan oo shabaggeedii birta ah, sallaan jaranjaro, daboolka godka, xayndaabka mesh, rebar alxanka alxanka rebar, caqabad dhawaaqa, deedka iwm
Shirkadeena waxay ku taalaa Degmada Anping oo ah "Dhulkii Hooyo ee Mesh Mesh" ee Shiinaha.
Khibrad badan iyo tayo sare leh dhammaantood ayaa diyaar kuu ah adiga! Waxaan si kal iyo laab ah kuugu martiqaadeynaa inaad soo booqato warshadeena.
Hore: Xaashida Galvanized